EU ekpebiela ịkwụ Afrịka ụgwọ ndokwa – hoo!haa!!
ỤLỌ NZỤKỌ OMEBEIWU YUROP akwadoola n’uju mkpebi na-aga akwụ mba Afrịka ụgwọ ndokwa maka arụ nile ndi ọcha kpasara ndi isi ojii oge Yurop chịrị Afrịka.
Iwu ọhụrụ ahụ chọrọ ka mba dịgasị na Yurop weta usoro mgbanwe iji belata mmegide a na-emegide nde pụrụ nde ndi isi ojii bụ ụmụ amala Yurop dịka n’usoro agụm akwụkwọ, ebe obibi, ikpe nkwụmọtọ, ọrụ ndi uwe ojii nakwa ndọrọ ndọrọ.
Mkpebi ahụ nke ndi omebeiwu madụ narị ise n’iri atọ n’ise (535), madụ iri asatọ (80) jụrụ ajụ ebe madụ iri anọ n’anọ (44) esonyeghi na-akpọkukwa mba nile so n’otu kitọtara mba nile dị na Yurop bụ European Union (EU) n’olu bekee ka ha bie mmachi a machiri ozi dị iche iche banyere arụ ala nile a rụsara ndi Afrịka n’oge gara aga ma rịọkwaa ha mgbaghara.
N’agbanyeghị na ya bụ mkpebi enweghị ikike iwu ọbụla, a hụtakwara ya dịka ọpụrụ iche maka ileru anya na mkpagbu na mbibi nke ihe ruru madụ nde iri n’ise gabigara n’Afrịka.
Mkpebi ahụ ha mere n’abalị iri abụọ n’itolu nke ọnwa a bụ Maachị kwukwara sị “Akụkọ banyere mmegide emegidere ndi Afrịka nakwa ndi isi ojii dịka ịgba ohu, mmegide apartheid, ikpochapụ mba tinyekwara arụrụ ala ndi ọzọ nke ndi Afrịka gabigara n’aka ndi ọcha bụ nke anaghị ekwute okwu ya chaa chaa n’ogo ogo Gọọmentị ọbụla na mba ndi so n’otu EU.
Mkpebi ahụ nke onye welitere ya bụ onye omebeiwu si mba Briteenụ bụ Claude Moraes n’ihi mmegide n’ihi agbụrụ nke e megidere Cecile Kyenge bụ onye isi ojii mbụ ji ọkwa Mịnịsta na mba Ịtali.
Site na mkpebi nke a, a na-achazị ụlọ ọrụ European Commission ọkụ iji mapụta ego maka itinye mkpebi a n’ọrụ n’Usoro Mmefu Ego kwa afọ asaa nke otu EU a na-achọ iwepụta.
Amel Yacef, onye isioche otu na emegide mmegbu n’ihi agbụrụ n’ala Yurop bu the European Network Against Racism, gwara ndi nta akụkọ na ya bụ mkpebi bụ “ ọpụrụ iche nakwa adịghị mkpaya ikike dịịrị ndi isi ojii n’ala Yurop”.
Previous Post: AZỤ(fish)/AZỤ (back)/ANỤ(meat/animal)
Nke a bụ ‘right step in the right direction’. Ndị Ọmebeiwu Yurop dalụnụ n’uju.